Faa'iidooyinka timirta ee cilmi baadhis lagu xaqiijiyay - Caafimaad tips
Home / Caafimaadka / Cuntada / Faa'iidooyinka timirta ee cilmi baadhis lagu xaqiijiyay
Admin March 27, 2020 Caafimaadka, Cuntada
Faaiidooyinka caafimaad ee timirta | Geedka timirtu waa geed ka baxa dhulalka kulaylaha gaar ahaan dhulka aysan ka baxayn badiba dalagyada kale ee la quutaa, timirtu waa midho macaan waana midhaha geedka timireedka sidoo kale timirtu waxay cunto sugan u ahayd umada ku nool bariga dhexe kumanaan sano.
Photo by Christian Kunz from Pexels
Timirta waxaa laga helaa faaiidooyin caafimaad oo aad u tiro badan waxayna waxtar u leedahay qaybo badan oo kamida jidhka bini aadamka hadaba faaiidooyinka iyo mucjisooyinka alle ku abuuray midhaha timirta iyo waxyaabha ugu caansan ee laga dhaxlo cunista timirta ayaan halkan kugula wadaagaayaa.
Maadaama timirtu leedahay faaiidooyin aad u tiro badan waxaa muhiim ah inaad si degan u akhrisato qormadan xiisaha badan ee ku saabsan waxtarka timirtu inoo leedahay.
Timirta waxaa laga helaa tamar
Timirta waxaa ku jirta oo laga helaa sonkor dabiici ah sida glucose fructose iyo surcose sida daraadeed tamarta sare ee ku jirta timirta waxaa loo aanayn karaa sonkorta dabiiciga ah ee laga helo timirta.
Dad badan oo aduunka ku nool waxay wakhti ka mida maalintooda cunaan timirta dabiiciga ah iyagoo u cunaaya cunto fudud oo galabnimo ah waa markay dareemaan deganaan la'aan iyo caajisnimo si ay uga soo kabtaaan heerka tamartooda oo hoos u dhacay.
Had iyo jeer markaad jimicsi samaysid ama aad u baxdo magaalada waxaad dareemaysaa daal. sidaa darteed daraasad lagu daabacay joornaalka caalamiga ah ee cilmiga cuntada iyo nafaqada ayaa sheegtay in timirta laga helo nafaqooyin lagama maarmaan ah isla markaana qofka cunaaya ay ka caawiso sidii qofku u soo ceshan lahaa tamartiisa .
Sidaa darteed dadka muslimiinta ah wakhtiga soonka waxay ku afuraan oo sunada nabigeena muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisha ha ahaatee ka mid in qofku waxa ugu horeeya ee uu afka geliyo ay tahay timirta.
Timirta iyo maskaxda
Daraasad uu hogaaminayo mustafa mohammed essa oo haysta Ph.D waxay soo jeedisay in timirtu ay ka hortagto culayska sunta ah ee maskaxda sidaa darteed sida lagu xusay daraasada midhaha timirtu waa il wanaagsan oo laga helo fiberka cuntada waxayna ka hortagtaa cudurada maskaxda ku dhaca sida alzheimers iyo kuwa waalida keena.
Daawo dhaqameedka reer tunisia timirta waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunada caloosha ku dhaca , sida lagu xusay daraasad ku saabsan saameynta fiberka cuntada ee laga helo timirta waxay muhiim u tahay dheefshiika iyo dhaqdhaqaaqa saxarada, sidaas darteedna daraasad kale oo lagu daabacay joornaalka cilmiga beeraha iyo cuntada ayaa lagu sheegay in timirtu leedahay fiber aad u wanaagsan oo la dagaalama calool fadhiga ama calool istaaga.
Timirta iyo dhiig yaraanta
Timirtu waa il wanaagsan oo nafaqooyin badan laga helo waxaana laga helaa birta dhiiga hadaba markii laga hadlaayo dhiig yarida timirtu Birta oo ayaan gacan ka gaysan karta dhiig yaraanta sidaa darteed hadii qofka dhiigu ku yar yahay waxaa lagu gartaa.
Neefsashada oo gaaban
Cidiyaha oo jilicsan
Nasiib wanaag inaad cunto cuntooyinka hodanka ku ah Birta sida timirta waxay gacan ka gaystaan in qofku ka soo raysto dhiig yarida sidaa oo ay tahay waxaa lagula taliyaa dadka ka cabaanaaya dhiig yari inay ku dadaalaan cunista timirta.
Timirta iyo kansarka
Timirtu waxay la dagaalantaa cudurka kansarka illaahay ha inaga hayee intuu ku dhacayna haka shaafiyee, timirta waxaa ku jirta maadada loo yaqaano selenium oo ka hortag u ah cudurka kansarka sidaas darteed dadka beerta timirta waa sababta aysan u aqoon cudurka kansarka , hadaba waxaa muhiim ah ina lagu dadaalo cunista timirta maadaama illaahay uu awood u siiyay inay ka hortagto cudurka kansarka.
Timirta iyo galmada
Timirta waxay kaloo faaiidooyin badan u leedahay raga laakiin marka laga hadlaayo waxtarka dhinaca galmada taasi waa mida ugu muhiimsan waxtarka timirta sidaas darteed timirtu waxay hodan ku tahay maadooyinka loo yaqaano amino acids kuwaas oo la ogyahay inay kordhiyaan adkaysiga galmada ama sii wadida galmada sidaa awgeed daraasadaha qaar waxay ku talinaayaan in raga iyo dumarka labaduba joogteeyaan cunista timirta si ay u sii wadaan galmada. Halkan akhriso cuntooyinka galmada xoojiya
Timirta iyo uurka
Timirtu waxay u wanaagsan tahay hooyada uurka leh gaar ahaan waxay fududaysaa marxalada foosha iyo dhalmada iyo dhiiga ka dambeeya waayo waxay saameyn togan ku leedahay dhiig baxa umusha ka dib. - Halkan ka akhriso Sida ugu fudud ee uurka loo qaado
Timirta iyo gaaska
Gaasku waa caabuq ama barar caloosha dhexdeeda ah waxayna mararka qaar noqotaa xaalad xanuun badan oo keenta infakshan hadaba timirtu waxay gaaska iyo aysiidha caloosha ka ilaalisaa inay dhaawac gaadhsiiso dahaadhka caloosha sidaa darteed waxaa wanaagsan in lagu dadaalo in timirta lagu afuro iyadoo la raacaayo sunada nabigeena suuban maxamed scw.
Timirta iyo cayilka
Cuntada iyo jimicsiga labaduba waa qayb muhiim ah oo aan laga maarmi karin marka laga hadlaayo miisaan dhimista sidaas oo ay tahay hadana labadooda oo kaliya kuma siin doonaan awood aad miisaanka ku dhinto laakiin waxaa muhiima inaad ogaato in cuntada aad cunaysaa ay qayb ka tahay dadaalka dheer qofku ugu jiro inuu dhimo miisaanka iyo culayska jidhka sidaa darteedna cuntada aad cunaysaa waa inay noqotaa mid nafaqo leh isla markaan laga heli karo fiber sidoo kale waa in laga helaayo xadi aad u hooseeya o calories ah hadaba timirta maadaama ay tahay midho faaiidooyin caafimaad oo badan laga helo waxaa la xaqiijiyay inay hoos u dhigto miisaanka qofka, sidaa daraadeed hadii aad rabto sida loo dhimo miisaanka ku dadaal cunista timirta. - Halkan ka akhriso cuntooyinka miisaan dhima
Timirta iyo cudurka macaanka
Cudurka macaanka siyaabo badan ayuu ku yimaadaa sida dhaxal ahaan iwm sidaas darteed ilaa hada la iskuma waafaqsana in sonkorta nooca ay doontaba ha ahaatee laga qaadi karo sonkorowga.
Timirta marka wajiga la marsado waxaa laga helaa wajiga oo iftiima iyo shacni waayo timirta waxaa ku jirta maadada loo yaqaano pantothenic acid oo sidoo kale loo yaqaano vitamin B5 taas oo ka dhigaysa timirta mid waxtar u leh wajiga sidoo kale waxay gacan ka gaysataa yaraynta hanaanka gabowga maqaarka sidaa daraadeed inaad timirta u isticmaasho wajiga waxaad xaqiiqdii arki doontaa farqi aad u wanaagsan oo u dhexeeya markii hore iyo hada.
Timirta iyo timaha
ilaalinta iyo daryeelka timaha waxaa kaa xiga inaad cunto maalintii 2 ilaa 3 xabo oo timir ah waayo timirta waxay daawaysaa daadashada timaha sido kale waxay nafaqaysaa tinta.
Timirtu waa midho laga helo faaiidooyin iyo waxtar caafimaad sidoo kale waxy jidhka siisaa nafaqooyin aad u tiro badan waxayna aad ugu fiican tahay inay shaqada dheefshiidka wanaajiso sidoo kale waxay ka hortag u tahay cudurada halista ah.
Timirta waxaa loo isticmaali karaa cabitaan ahaan iyo cunto ahaan labadaba waayo waa qaababka ugu caansan dunida ee loo isticmaalo maadaama ay tahay cunto diyaarsan isla markaan meel kasta laga heli karo.
Fadlan hadii aad ka faaiiday maqaalkan share gare